MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA BULL DOG EE PAKISTAN - EEYAHA
Gull Dong (Pakistani Bull Dog) waa nooc aad u muruq iyo awood badan. Waxaa si xoogan loogu dhisay feeraha qoto dheer iyo dhakada weyn. Dharkiisa gaaban, siman, fidsan wuxuu ku yimaadaa kala duwanaansho cadaan, madow, cawl iyo gogol. Gull Dongs badanaa waa ka dheer yihiin Pakistaniyiinta kale Molosser taranka sida Terrier Dahab ah iyo PBK . Wadamada Reer Galbeedka, Gull Dong (Pakistani Bull Dog) ayaa inta badan lagu qaldaa sida PBK aka Bully Kutta . Noocani wuxuu u eg yahay majaajillada Maraakiibta Mareykanka muuqaal ahaan.
Pakistani Bull Dog waa eey aad u jecel oo daacad ah oo u janjeera in uu ahaado dhinaca xukunka wuxuuna u baahan yahay milkiile adag oo fahmaya dhaqanka eyga . Mid la'aan, noocani wuxuu noqon karaa mid adag in la xakameeyo, eey dagaal badan oo ka digtoonaada shisheeyaha. Waxay u baahan yihiin inay la joogaan dadka oo ay ogaadaan meesha ay ku jiraan xirmooyinkooda si ay si dhab ah ugu farxaan. Waxay sameystaan ​​eeyo shaqeeya oo wanaagsan, oo dhab ka ah shaqooyinka la siiyo oo si wanaagsan ula jaanqaadaya deegaankooda iyo shaqada gacanta ku haysa. Daawasho wacan iyo eeyo ilaaliya. Tababar iyo is dhexgalka bulshada waa inuu bilaabaa da'da hore. Aad ugu daacad ah qoyskooda, way ilaalin doonaan haddii baahidu timaado. Waxay yihiin kuwo aad u feejigan oo kacsan. Lagu yaqaan xirfadahooda ugaarsiga orsada, hal qof oo qaangaar ah Dong ayaa si fudud uga hortagi kara orso. Uguyaraan tababarka , oo ay weheliso qaddarka jimicsiga iyo hogaamiye baako adag, waxay soo saari doontaa eey xasilloon, adeecsan. Bulsho si aad ufiican marka aad da 'yartahay si loola dagaallamo dabeecadaha gardarrada ah oo hubi inaad eeyga xakameyso marka eeyaha kale joogaan. Bar eyga ixtiraamka aadanaha adigoon u oggolaan booda oo aan u oggolaanayn inay marka hore soo gasho albaabbada. Dadku waa inay eeyga sameeyaan ciribta dhinaceeda ama gadaashooda markaad socoto . Waxay siisay natiijooyin aad ufiican sidii ilaaliyaha hantida, laakiin isla markaa waxay sameyn kartaa eey wehel ah oo weyn. Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo baakadeeda . Markii aan dadku waxay la nool yihiin eeyaha , Waxaan noqonay xirmadooda. Xirmada oo dhan waxay lashaqeysaa hal hogaamiye. Khadadka si cad ayaa loo qeexay xeerarna waa la dejiyay. Adiga iyo aadamaha oo dhan WAA INAAD uga sarraysiisaan sida eyga. Taasi waa sida kaliya ee xiriirkaagu u noqon karo mid guuleysta. Markii si habboon loo tababbaray oo loola dhaqmay, kani waa eey aad u wanaagsan oo wehel weyn u ah qoyska.
retriever dahab ah oo lagu qasiyey xayawaanno waaweyn
Dhererka: Ragga 34 - 42 inji (88 - 106 cm) Dumarka 30 - 34 inji (76 - 86 cm)
Miisaanka: 90 - 140 rodol (40 - 63 kg)
Noocani wuxuu ku fiicnaan doonaa meel badan wuxuuna ka dhigayaa eeyo beeraha wanaagsan oo ay kula kulmi karaan caqabado maalinle ah. Si kastaba ha noqotee, jimicsi ku filan waxay la qabsan karaan nooc kasta oo jawi ah.
Eygan isboortiga wuxuu u baahan yahay jimicsi fara badan maalin kasta wuxuuna ku kori doonaa shaqo la qabto. Waxay jecel yihiin firfircoonaan adag, waxaana doorbidayaa isku darka nooc nooc ah, eeyahaani waa kuwo aad u caqli badan waxayna jecelyihiin tartan wanaagsan. Waxay u baahan yihiin in la qaato maalin kasta, kacsan, socod dheer , orod ama ku garabsoco markaad baaskiil wado. Inta lagu jiro socodka eeyga waa in loo sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaashiisa qofka haya hogaanka, sida maskaxda eeyga maskaxdiisa hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu noqdo aadanaha.
Qiyaastii 10 ilaa 13 sano
Eyga Pakistaaniyiinta ee Dulliga ah, oo loogu yeedho Gull Dong ama Bully Gull Terr oo ku sugan dalkiisa hooyo ee Pakistan, ayaa lagu sameeyay iyada oo laga talaabayo tayada ugu saafiga ah uguna sarraysa Gull Terriers (Baakistaan ​​Bull Terriers) iyo PBK (Mastiffs Pakistan) . Waxay leedahay cabirka iyo awoodda a PBK iyo xawaaraha iyo dhaqaaqa ee Terrier Dahab ah . Baakistaan ​​waxaa badanaa loo isticmaalaa ugaadhsiga, ilaalinta, bahashinta iyo dagaal eeyga.
isku dhafan dane shar pei
Jackson oo ah Eey Eey Pakistani ah oo Ey ah oo 2 bilood jir ah kuna nool Hindiya— 'Waa eey buuxa oo aad u firfircoon.'
Murli Pakistani Bull Dog (Gull Dong) oo ah eey yar oo 3 bilood jir ah oo ka yimid Peshawar, KPK, Pakistan
Diesel eeyga dhalaalaya ee Pakistani Bull Dog (Gull Dong) eey yar markay jiraan 2 bilood
Moti (Pearl) Gull Dong oo qiyaastii 2.5 sano jir ah, waxaa iska leh Alamgeer Chattha oo ka yimid Matiyani (Chak nr. 143 RB), oo u dhow Chak Jhumra, Punjab, Pakistan
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo Ey Dibi Dibi Pakistani ah
Sawirada Eey Eega Pakistani 1
bull terrier mix godka dibiga
buluug eey Pit Staffordshire Maraykanka